အဆိုတော် (အဖွဲ့) | Myanmar Mp3 Album
Home / Myanmar Artist / အဆိုတော် (အဖွဲ့)
Category Archives: အဆိုတော် (အဖွဲ့)
Chill Session – ဝိသေသ (2013) [Album]
[Released: Oct 12, 2013. Genre: Hip-Hop/Rap. File. 320kbps MP3] ၀၁။ Intro ၀၂။ အမြောက်ထဲကအပေါက် ၀၃။ အကိတ် ၀၄။ အိပ်မက်များ ၀၅။ အတိတ်သစ် ၀၆။ ရူးလိုက် ၀၇။ အလင်းရင်းမြစ် ၀၈။ လွတ်နေတယ် ၀၉။ တစ်ကြောင်းလောက်ရေးပါဦး ၁၀။ Mary Jane ၁၁။ Paradise ၁၂။ Backstage Pess (Bonus Track) [Download Whole Album – 105.39MB] (Droplr) [Download Whole Album – 105.39MB] (MixtureCloud) Password: www.ehlar.com Special Thank – Thae … Continue Reading →
November 1, 2013 MMA အဆိုတော် (အဖွဲ့) Chill Session Myanmar Artist New Myanmar Albums Leaveacomment
ဝါရီရူး – တသက်တာမှတ်တမ်းနှင့်အတွေးအခေါ်များ (2013) [Album]
[Release: 2013. Genre: Rock, Hip-Hop. File: Mp3. Quality: 192kbps] ၀၁။ စစ်သားတစ်ယောက်ရဲ့သွားရာလမ်း ၀၂။ အရေးတော်ပုံကျမ်း ၀၃။ မှတ်တိုင် (feat. Max Yang) ၀၄။ ကျော်စွာ (feat. Soul Seven) ၀၅။ အောင်ဇေယျ ၀၆။ အာဠာဝကရဲ့ညစာ ၀၇။ အခြားပလက်ဖောင်း ၀၈။ ရဲစိတ် (နှလုံးသားက သတ္တိ) [feat. Seven Vidarr] ၀၉။ သူ့နှလုံးသားမှစကားပြောသောအခါ ၁၀။ ရွှေမန်းဆီသို့ (2009) [feat. ကိုဇေ] ၁၁။ ၂၁ ရာစု လူချွန်လူကောင်း ၁၂။ ချစ်ရေးဆို [Download Whole Album – 59.21MB] Credit … Continue Reading →
October 1, 2013 MMA အဆိုတော် (အဖွဲ့) အခွေ (အများ) အခွေ (တကိုယ်တော်) ဝါရီရူး Myanmar Artist New Myanmar Albums Leaveacomment
Wanted – တစ်ယောက်တစ်နေရာမှ (၂၀၁၃) [သီချင်းစာအုပ်]
Digital Booklet – Wanted – Ta Yauk Ta Nay Yar Mha.pdf Download Wanted – Ta Yauk Ta Nay Yar Mha.pdf Credit – ITBURMA
August 8, 2013 MMA အဆိုတော် (အဖွဲ့) Myanmar Artist New Myanmar Albums Wanted 1 Comment
No. Song Title Download 1. အခုလောလောဆယ် Download 2. အေးဆေးပဲ Download 3. ဘယ်လိုငြိမ်းသတ်ရမလဲ Download 4. ဒီအတိုင်း Download 5. ဒို့အတူ Download 6. အိမ်ပြေး Download 7. ခဏလေး Download 8. ကျေးဇူးတင်တယ် Download 9. ငါ့ဂီတ ငါ့ဗီဇ Download 10. ငါ့ကြောင့် Download 11. ငါ့ရဲ့အစစ်အမှန် Download 12. နောက်ထပ်မညာပါနဲ့ Download Shared By Ko Shan Lay @ Tanyawzinkglay WWW.TANYAWZINKGLAY.BLOGSPOT.COM
February 20, 2013 Shanlay အဆိုတော် (ကျား) အခွေ (အများ) Myanmar Artist Wanted Leaveacomment
Snare – ဘကြီးဖြိုး နဲ့ ဦးနေဝင်း [သီချင်းစာအုပ်]
Credit – itburma Youtube Playlist Snare – ဘကြီးဖြိုး နဲ့ ဦးနေဝင်း (CD ) Here!
February 9, 2013 MMA အဆိုတော် (အဖွဲ့) Myanmar Artist New Myanmar Albums Snare Leaveacomment
ဘကြီးဖြိုးနဲ့ ဦးနေဝင်း-Snare (CD ) နားထောင်ရန် Click [ MAMC ] ဘကြီးဖြိုးနဲ့ ဦးနေဝင်း-Snare (CD ) ဒေါင်းလော့ရန် Click [ Mediafire ] Credit MAMC(Myanmar All Music Channel [ Click ]
February 9, 2013 Datha အဆိုတော် (ကျား) အခွေ (အများ) အခွေ (တကိုယ်တော်) Myanmar Artist New Myanmar Albums Snare Snare Snare Leaveacomment
Hip2– သြော်…လူတွေ [Album]
No Song Title Download ၀၁ ငွေကြယ်ပွင့် Download ၀၂ သြော်…လူတွေခက်ပါလား Download ၀၃ ​တိမ်လိုလေလို Download ၀၄ ၂ ကျပ် Download ၀၅ Tattoo Download ၀၆ ဆယ်ကျော်သက် Download ၀၇ YGN & BKK Download ၀၈ နေ့စွဲ Download ၀၉ ဝူးလားလား Download ၁၀ လူတွေလည်းအရိုးပဲရှိတော့တယ် Download ၁၁ GNN Download ၁၂ ​Cypher Download [Download Whole Album]
January 29, 2013 MMA Hip2Myanmar Artist New Myanmar Albums Leaveacomment